Haintrano tetsy Andohatapenaka: trano 22 ravan’ny afo, 80 mahery traboina | NewsMada
Haintrano tetsy Andohatapenaka: trano 22 ravan’ny afo, 80 mahery traboina
Tsy mahita andehanana ary rava fananana ireo mponina eny Andohatapenaka I vokatry ny haintrano ny alarobia teo. Maherin’ny 80 ireo tsy manan-kialofana ankehitriny.
Lasa lavenona tao anatin’ny ora vitsy monja ny fananan’ireo mponina 22 tafo eny Andohatapenaka I, faritra Besitrika. Ny alarobia tokony tamin’ny 8 ora latsaka fahefany maraina, nirehitra ny afo tamina tokantrano iray ao an-toerana. Vokatry ny rivotra nitsoka mafy, niitatra tamin’ireo trano hafa vita amin’ny « tole » izany. «May any avokoa na ny vola na ny fananana na ny fitafy rehetra », hoy ny fitarainan’ireo mponina traboina, omaly. Notohizan’izy ireo tamin’izany fa ireo fitafy an-kodotra sisa ananan’izy ireo. Ny arovava aza, tsy ananany intsony. « Tsy fantatray ny niandohan’ny afo fa izy efa niitatra be no nanaitra anay », hoy ny fanazavan’ireo traboina.
Tara ny mpamonjy voina
« Efa ho 30 mn taorian’ny loza vao tonga ny mpamono afo. Vain’afo sisa tratran’izy ireo», hoy ny fanazavan’ireo traboina. Taorian’izay, nijery ny zava-nisy teo Besitrika ny sefo fokontany ary nanolotra vola ho fanampiana azy ireo. Mialoka amina tranon’olona tsara sitrapo ireo traboina. Nisy koa nanolotra vary iray gony sy vola mitentina 80 000 Ar ho solon-tsakafo. Manolona ny zava-misy, velon-taraina ireo mponina ary mangataka fanampiana amin’ny fitondram-panjakana.
Ankoatra izay, trano iray ao Ambodifotatra-Sainte Marie, nirehitra ny talata tolakandro teo taorian’ny adina mpivady tompon’ilay trano. Taorian’izay, nosamborin’ny mpitandro filaminana ilay renim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana.